Topic · Freedom of expression · Change.org
Petition to Donald J. Trump, Donald J. Trump, Donald Trump, United Nations
Stop Saudi Arabia from executing innocent 23 year old blind and deaf Munir Adam.
Saudi Arabia is known for its human rights violations and now is planning to beheadablind and deaf man named Munir Adam for the crime of having an opinion different than their own. This is unacceptable especially after Trump's recent visit to Saudi Arabia... We ask the Trump administration and the United Nations to take action against this decision. If the president wants to make America great again he should start by standing up against evil again not by empowering it. We stood with president Trump even though some of us are not US citizens or in the US at all for that matter but we did so because we believed he was right and honest about the things that he said we now ask that he or the UN take action to stop this savagery against innocent and handicapped human beings. God bless us all, God bless Israel and God bless the United States of America.
Petition to President U Win Myint, U Htun Htun Oo, U Win Swe, Daw Aung San Suu Kyi, U Khin Maung Tin
Free Wa Lone & Kyaw Soe Oo ကိုဝလုံး နှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့အား ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပါ
Free Wa Lone &amp; Kyaw Soe Oo ကိုဝလုံး နှငျ့ ကိုကြျောစိုးဦးတို့အား ခြှငျးခကျြမရှိလှတျပါ (Unicode version ကို အောကျတှငျ ရှုပါ။) သို့To, ၁။ ဦးဝင်းမြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်သမ္မရုံး1. U Win MyintThe President,Republic of the Union of MyanmarPresident Office ၂။ ဦးထွန်းထွန်းဦးပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်2. U Htun Htun OoChief Justice of the UnionSupreme Court of the Union ၃။ ဦးဝင်းဆွေတရားသူကြီးချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်3. U Win SweYangon Region Chief JusticeHigh Court of the Yangon Region ရက်စွဲ။ ။ ၁၆၊၉ ၊၂၀၁၈ Date: 16.9.2018 အကြောင်းအရာ ။ ။ ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့အား ချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါရန် တင်လျှောက်ခြင်းRe: Petition Calling for Unconditional Release of Wa Lone and Kyaw Soe Oo ၁။ ရိုက်တာသတင်းအေဂျင်စီမှ သတင်းထောက်များဖြစ်ကြသော ကိုသက်ဦးမောင် (ခ) ဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦး (ခ) မိုးအောင် တို့သည် အင်းဒင်ရွာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တပ်မတော်သားများနှင့် ရဲအရာရှိများမှ နောင်တွင်ကျုးလွန်ခဲ့သည်ဟု အထောက်အထားသက်သေများအရသိရှိခဲ့ရသော ရွာသား ၁၀ ဦးအား အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုသတင်းကို သတင်းရယူထောက်လှမ်းနေစဉ် နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်စာတမ်းများ လက်ဝယ်တွေ့ရှိသည်ဟုဆိုကာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၌ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ၎င်းတို့အား နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ (၁) (ဂ) နှင့် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှ စွဲချက်တင်ခဲ့၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကာ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်စီ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။1. Two Reuters news journalists from Myanmar, Thet Oo Maung (aka) Wa Lone and Kyaw Soe Oo (aka) Moe Aung, were arrested on December 12, 2017 while collecting the news on the then alleged murders of 10 villagers by the military soldiers and police in Inn Din Village under the article3(1) (c) in the Burma Official Secrets Act. On September 3, 2018, Yangon Northern District Court sentenced them7years in prison each. ၂။ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေမှာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအစိုးရမှ ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအား ကျွန်ပြုအုပ်ချုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေဖြစ်သောကြောင့် မျက်မှောက်ခေတ် လွတ်လပ်ရေးရပြီး ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းနေသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနှင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနှင့်လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့်လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီစနှစ်အရ ပြည်သူများမှ ရွေးချယ်အာဏာအပ်နှင်းခြင်းခံရသော အရပ်သားဦးဆောင်သည့် အစိုးရနှင့်လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ တတိယမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သော လွတ်လပ်သောတရားရေးမဏ္ဍိုင်နှင့်လည်းကောင်း မည်သည့်နည်းနှင့်မှ အပ်စပ်ခြင်းမရှိသည်မှာ၊ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသင့်တော့သည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။2. The Burma Official Secrets Act was put in place by the British colonial government in 1923 when the country was under the rule of British Empire in order to support the colonial rule. It was imposed to criminalize transfer of virtually any information in possession of the colonial government. Therefore, it is undeniable that the Act no longer reflects present-day Myanmar (Burma) asademocratising nation, its citizens, the values of democracy, the civil government that was elected by its citizens, norafair and independent judiciary, the third pillar of democracy. ၃။ ၎င်းအပြင် နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေတွင်ပါရှိသော အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များမှာ ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းမှုမရှိပဲ ကျယ်ပြန့်စွာဖွင့်ဆိုထားသောကြောင့် တရားရေးအာဏာပိုင်များအနေနှင့် မည်သည့်အရာသည် နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သည်၊ မဖြစ်သည်ကို လိုအပ်သလို အနက်အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည့်အပြင် တရားပြိုင်သည် ပြစ်မှုမြောက်ကြောင်း လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်သော်လည်း တရားရေးအာဏာပိုင်များမှ ပြစ်မှုမြောက်၊ မမြောက် ဆုံးဖြတ်နိုင်သော တရားစီရင်ရေးအား သင့်လျော်သည်ထက်ပို၍ကျယ်ပြန့်သော တဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသည့် ဥပဒေလည်းဖြစ်သည်။ အထက်ပါအချက်များကြောင့် နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေသည် ပယ်ဖျက်သင့်သောဥပဒေ၊ ပယ်ဖျက်ရန်လိုအပ်သည့်ဥပဒေဖြစ်ပါသည်။3. In addition, the language in the Burma Official Secrets Act is nuanced inaway that it lacksaclear definition and classification of what constitutes as "official secret" and therefore can be easily manipulated. This linguistic nuance opens the door to unfair and selective enforcement due to the vague nature of what constitutesaviolation of the Act. Due to this reason, Burma Official Secrets Act should be repealed. ၄။ နိုင်ငံတော်လျှို့ ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ (၁) (ဂ) အရ မည်သူမဆို နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံအကျိုးကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်စေသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရန်သူတဦးတယောက် (သို့) တစုတဖွဲ့ အတွက် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း အသုံးဝင်စေရန် တွက်ချက်၍၊ ရည်ရွယ်၍ (သို့) တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း အသုံးဝင်ကောင်းဝင်နိုင်သော လျှို့ဝှက်ရုံးသုံးသင်္ကေတ၊ စကားဝှက်၊ ရုပ်ပုံ၊ စနစ်ပုံ၊ ပုံစံငယ်၊ ပစ္စည်း၊ စာတို (သို့) အခြားစာရွက်စာတမ်း၊ သတင်းအချက်အလက် များကို ရယူ၊ စုဆောင်း၊ ကူးယူ၊ ပုံနှိုပ်ခြင်း (သို့) အခြား ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့ခြင်း ပြုလုပ်ပါက ထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ်အထိ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်ဟု ပါရှိပါသည်။4. The Burma Official Secrets Act Article (3) (1) (c) states ," If any person for any purpose prejudicial to the safety or interests of the State obtains, collects, records or publishes or communicates to any other person any secret official code or password, or any sketch, plan, model, article or note or other document or information which is calculated to be or might be or is intended to be, directly or indirectly, useful to an enemy; he shall be punishable with imprisonment foraterm which may extend, where the offence is committed ... in relation to any secret official code, to fourteen years ..." ၅။ ရိုက်တာသတင်းအေဂျင်စီမှ သတင်းထောက်များဖြစ်ကြသော ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ၎င်းတို့လက်ခံရရှိသော အဆိုပါ စာရွက်စာတမ်းများကို ဖမ်းဆီးခြင်းမခံရမီ ဖတ်ရှုချိန်မရရှိခဲ့ကြောင်း တရားခွင်တွင်ထွက်ဆိုခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ထိုစာရွက်စာတမ်းများကို နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းသော စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်ကြောင်း ဖမ်းဆီးခြင်းမခံရမီ သိရှိခဲ့သည်ဟု ယူဆနိုင်ဖွယ်ရာ အထောက်အထားမခိုင်လုံကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။5. Wa Lone and Kyaw Soe Oo, correspondents with Reuters, have given statements during the court proceedings expressing they had no time to read the documents they received on December 12 before the arrest. There is also an absence of sufficient evidence required to prove that they were aware the documents were classified “official secret” at the time of the arrest. ၆။ ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့သည် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရချိန်တွင် လက်ဝယ်တွေ့ရှိသော စာရွက်စာတမ်းများကို သတင်းသမားများအနေဖြင့် သတင်းထောက်လှမ်းရေးသားရန် ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ ၎င်းတို့သည် အင်းဒင်ရွာတွင် တပ်မတော်သားများနှင့် ရဲအရာရှိများမှ နောင်တွင်ကျုးလွန်ခဲ့သည်ဟု အထောက်အထားသက်သေများအရ သိရှိခဲ့ရသော ရွာသား ၁၀ ဦးတို့အား ဥပဒေပ သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထောက်လှမ်းနေစဉ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။6. Wa Lone and Kyaw Soe Oo obtained the documents found in their possession at the time of their arrests to aid their investigative work as media professionals. They were arrested while investigating the Inn Din massacre of 10 villagers, which later facts have shown to be committed by Tatmadaw troops and the police. ၇။ ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ (၁) (ဂ) တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံအကျိုးကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်စေသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရန်သူတဦးတယောက် (သို့ ) တစုတဖွဲ့အတွက်အသုံးဝင်သော စာရွက်စာတမ်း (သို့) သတင်းအချက်အလက် များကို ရယူခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပဲ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်၏ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ဥပဒေမဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို တရားဥပဒေအရစီရင်နိုင်ရန် သတင်းထောက်လှမ်းဖော်ထုတ်သော သတင်းထောက်တာဝန်အရ ၎င်းတို့လက်ခံရရှိသော စာရွက်စာတမ်းများကို လက်ခံရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ကြိုးစားဖော်ထုတ်မှုကြောင့် အင်းဒင်ရွာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကို အများပြည်သူသိရှိခွင့်ရခဲ့သလို ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုလည်း တရားဥပဒေအရ ပြစ်ဒါဏ်များချမှတ်ခဲ့သည်။7. Wa Lone and Kyaw Soe Oo did not obtain the documents which “might be or is intended to be, directly or indirectly, useful to an enemy” fora“purpose prejudicial to the safety or interests of the State” as stated in Article3(1) (c) of Burma Official Secrets Act. They accepted the documents as part of their job as correspondents , and as part of fourth pillar of democracy, to investigate wrong doings so perpetrators could be held accountable in accordance with law. The Inn Din massacre was brought to public attention, and perpetrators were arrested and sentenced asaresult of their efforts. ၈။ သတင်းမီဒီယာဥပဒေ ပုဒ်မ ၇ တွင် “သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးသည် စစ်မက်ဖြစ်ပွားရာဒေသ၊ အရေးအခင်း၊ အဓိကရုဏ်း၊ အများပြည်သူဆန္ဒပြရာ နေရာဒေသတို့၌ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ် ထားသော စည်းကမ်းများနှင့်အညီ သတင်းရယူစဉ်တွင် - (က) လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်၏ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခွင့်၊ သတင်းမှတ်တမ်း စသည့်သတင်းရယူခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သောကိရိယာများကို သိမ်းယူခံရခြင်းနှင့်ဖျက်ဆီး ခံရခြင်းတို့မှ ကင်းလွတ်စေရမည်” ဟုပါရှိပါသည်။ အထက်ပါပုဒ်မအရ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ သတင်းရယူလျက်ရှိသော သတင်းမီဒီယာသမားများဖြစ်ကြသော ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့သည် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရခြင်းမှသော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမှသော်လည်းကောင်း ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။8. Article7(a) of Media Law also states, “Whileanews media worker is trying to get news in compliance with regulations specified by relevant and responsible organizations, in the areas where wars break out, and where conflicts or riots and demonstration take place he/she shall be exempt from being detained byacertain security related authority, or his/her equipment being confiscated or destroyed.” Based on this provision, Wa Lone and Kyaw Soe Oo clearly fall into this exception for journalists conducting lawful activity regarding an area of conflict or demonstration, and are therefore exempt from prosecution under the Burma Official Secrets Act. ၉။ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်၊ သတင်းမှန်သိရှိခွင့် နှင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် မရှိပါက ဒီမိုကရေစီစနစ်တခု လည်ပတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့ပါ၍ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တခုသည် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းနေခြင်းဖြစ်သည် (သို့မဟုတ်) အာဏာရှင်စနစ်သို့ နောက်ပြန်သွားနေခြင်းဖြစ်သည် ကိုသိရှိသုံးသပ်ရန် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်၊ သတင်းမှန်သိရှိခွင့် နှင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိရှိသည်၊ မရှိသည်ကို တိုင်းတာရမည်ဖြစ်ပါသည်။9. A democracy cannot function without the protection of media freedom, the right to information and the freedom of expression. Whetherapolitical phenomenon constitutesatransition to democracy orareversal to authoritarianism can be measured by the extent to which civil rights such as right to media freedom, right to information and right to freedom of expression are protected. ၁၀။ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့်သော်လည်းကောင်း ဒီမိုကရေစီအစိုးရနှင့်သော်လည်းကောင်း မအပ်စပ်သော ကိုလိုနီခေတ် ဗြိတိသျှအစိုးရမှ ရေးဆွဲထားသောဥပဒေအရ စတုတ္တမဏ္ဍိုင်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် မိမိတို့၏တာဝန်အား တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေသည်သာမက၊ သတင်းမီဒီယာဥပဒေ၏ ပုဒ်မ ၇ (က) အရ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသူများဖြစ်ကြသည့် သတင်းမီဒီယာသမားနှစ်ဦးအား လုံလောက်သည့်အထောက်အထားမရှိပဲ ပြစ်မှုထင်ရှားသည်ဟု လွဲမှားစွာချမှတ်ခဲ့သော စီရင်ချက်သည် ဒီမိုကရေစီနှင့်ဆန့်ကျင်၍ခေတ်နှင့်မလျှော်ညီသည်သာမက လိုရာဆွဲအဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည့်ဥပဒေတခုပေါ်တွင် အခြေခံချမှတ်သော တရားမျှတမှုနှင့်ဆန့်ကျင်သည့် စီရင်ချက်တခု၏သဘာဝကိုကျော်လွန်ကာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်လက်ထက်တွင် ကျင့်သုံးခဲ့သော ဖိနှိပ်မှုများနှင့် မူအရသော်လည်းကောင်း၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုအရသော်လည်းကောင်း မခြားနားသည့် ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သည့် အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်ဆန်သော စီရင်ချက်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃ (၁) (ဂ) အရ ကိုဝလုံး နှင့် ကိုကျော်စိုးဦး တို့နှစ်ဦးအပေါ် ချမှတ်ခဲ့သောစီရင်ချက်အား ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိပဲ စီရင်ချက်အရ ၎င်းတို့နှစ်ဦးဆက်လက်ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရလျက်ရှိပါက -10. The verdict of guilty passed in the absence of sufficient evidence under article3(1) (c) of Burma Official Secrets Act on the two correspondents, who were merely fulfilling their duty within the law as part of the fourth estate and therefore should be exempted altogether from the law according to article7(a) of Media Law, isamiscarriage of justice of greater gravity transcending an unjust ruling based onavague provision of an anti-democratic, anachronistic law open to unfair enforcement. This is an arbitrary verdict against law, which is, in principle and effect, no different from tyrannous acts of repression violated under the military dictatorship. Therefore, this unlawful verdict, if not reversed, would: (က) လွတ်လပ်ရေးရပြီး ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းလျက်ရှိသော်လည်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသည် ကိုလိုနီခေတ် ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ လောင်းရိပ် နှင့် ချယ်လှယ်ခြင်းခံရသောဘဝမှ မလွတ်မြောက်သေးကာ အချုပ်အခြာအာဏာ ထိပါးခြင်းခံနေရလျက်ရှိသောသဘောသို့ သက်ရောက်စေသည်။(a) Imply the post-independence Republic of Union of Myanmar, though transitioning to democracy, has not really liberated itself from shackles of the British colonial rule. (ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားရေးမဏ္ဍိုင်သည် လွတ်လပ်မှုမရှိ၊ တရားရေးမဏ္ဍိုင်အတွင်းတွင် အကျင့်ပျက်ချစားမှုရှိနေသည်ဟု အသွင်ထင်ဟပ်စေမည်ဖြစ်သည်။(b) Serve as the hallmark of judicial corruption and absence of judicial independence in Myanmar (ဂ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတွင် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်၊ သတင်းမှန်သိရှိခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် လုံးဝမရှိကြောင်း ပုံရိပ်ထင်ဟပ်စေမည်ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလမ်းစဉ်အပေါ်တွင်ထားရှိသော ပြည်သူများ နှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ယုံကြည်မှုမှာ များစွာကျဆင်းမည်ဖြစ်သည်။(c) Reflect Myanmar has no room for media freedom, right to information and freedom of expression. (ဃ) ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလမ်းစဉ်အပေါ်တွင် ထားရှိသောယုံကြည်မှု လုံးဝကင်းမဲ့သွားနိုင်သည့်နောက်တွင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ထောက်ခံမှုနှင့် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကျဆင်းသထက် ပိုမိုကျဆင်းမည်ဖြစ်သည်။(d) Lead toacomplete loss of faith in the transition to democracy andafurther decline in support from the international community and decline in international trade. (င) လက်ရှိအာဏာရအစိုးရနှင့် ပါတီအပေါ်တွင် ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ထောက်ခံမှု သည်လည်း ပိုမိုတိုးလို့ကျဆင်းမည်ဖြစ်သည်။(e) Precipitate an exponential drop in public and international backing for the incumbent government and the ruling party. ၁၁။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အများပြည်သူအကျိုးစီးပွား၊ နိုင်ငံ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားသောအားဖြင့်၊ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းမှလည်းကောင်း ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွား၊ အခြေခံရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာကိုလည်းကောင်း ကာကွယ်သောအားဖြင့် ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့အား ၎င်းတို့လက်ရှိကျခံနေရလျက်ရှိသော ပြစ်ဒဏ်များမှ ချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။11. Henceforth, with interest of the public and the state in mind, in the name of protection of the transition to democracy, livelihood of the citizens, basic rights and sovereignty, we call on to you for the unconditional release of Wa Lone and Kyaw Soe Oo. ပြည်သူနှင့်နိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွား၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလိုလား၍ အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါးခြင်းမှ ကာကွယ်လိုသော မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် ပြည်ပရောက်မြန်မာများကိုယ်စား -The undersigned, မိတ္တူကို -၁။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၂။ ဒုတိယဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဋ္ဌာန Cc'd: State Counsellor, Republic of the Union of Myanmar Deputy Minister, Ministry of the State Counsellor Office (Unicode version) သို့ ၁။ ဦးဝငျးမွငျ့ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော နိုငျငံတျောသမ်မတနိုငျငံတျောသမ်မရုံး ၂။ ဦးထှနျးထှနျးဦးပွညျထောငျစု တရားသူကွီးခြုပျပွညျထောငျစု တရားလှတျတျောခြုပျ ၃။ ဦးဝငျးဆှတေရားသူကွီးခြုပျရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးတရားလှတျတျော ရကျစှဲ။ ။ ၁၆၊၉ ၊၂၀၁၈ အကွောငျးအရာ ။ ။ ကိုဝလုံးနှငျ့ ကိုကြျောစိုးဦးတို့အား ခြှငျးခကျြမရှိလှတျမွောကျခှငျ့ပေးပါရနျ တငျလြှောကျခွငျး ၁။ ရိုကျတာသတငျးအဂေငျြစီမှ သတငျးထောကျမြားဖွဈကွသော ကိုသကျဦးမောငျ (ခ) ဝလုံးနှငျ့ ကိုကြျောစိုးဦး (ခ) မိုးအောငျ တို့သညျ အငျးဒငျရှာတှငျဖွဈပှားခဲ့သညျ့ တပျမတျောသားမြားနှငျ့ ရဲအရာရှိမြားမှ နောငျတှငျကြုးလှနျခဲ့သညျဟု အထောကျအထားသကျသမြေားအရသိရှိခဲ့ရသော ရှာသား ၁၀ ဦးအား အစုလိုကျအပွုံလိုကျ သတျဖွတျမှုသတငျးကို သတငျးရယူထောကျလှမျးနစေဉျ နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျစာတမျးမြား လကျဝယျတှရှေိ့သညျဟုဆိုကာ ၂၀၁၇ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ ၁၂ ရကျနတှေ့ငျ ရနျကုနျမွို့ မင်ျဂလာဒုံမွို့နယျ၌ ဖမျးဆီးခွငျးခံခဲ့ရပါသညျ။ ၎င်းငျးတို့အား နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြအကျဥပဒေ ပုဒျမ ၃ (၁) (ဂ) နှငျ့ ရနျကုနျမွောကျပိုငျးခရိုငျတရားရုံးမှ စှဲခကျြတငျခဲ့၍ ၂၀၁၈ ခုနှဈ စကျတငျဘာလ ၃ ရကျနတှေ့ငျ ပွဈမှုထငျရှားကွောငျး ဆုံးဖွတျကာ ထောငျဒဏျ ၇ နှဈစီ ပွဈဒဏျခမြှတျခဲ့ပါသညျ။ ၂။ နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြအကျဥပဒမှော အင်ျဂလိပျကိုလိုနီအစိုးရမှ ၁၉၂၃ ခုနှဈတှငျ မွနျမာနိုငျငံအား ကြှနျပွုအုပျခြုပျရာတှငျ အထောကျအကူပွုရနျ ရေးဆှဲပွဋ်ဌာနျးခဲ့သော ဥပဒဖွေဈသောကွောငျ့ မကျြမှောကျခတျေ လှတျလပျရေးရပွီး ဒီမိုကရစေီအသှငျကူးပွောငျးနသေော ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံနှငျ့လညျးကောငျး၊ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံ၏ နိုငျငံသူနိုငျငံသားမြားနှငျ့လညျးကောငျး၊ ဒီမိုကရစေီစနဈနှငျ့လညျးကောငျး၊ ဒီမိုကရစေီစနှဈအရ ပွညျသူမြားမှ ရှေးခယျြအာဏာအပျနှငျးခွငျးခံရသော အရပျသားဦးဆောငျသညျ့ အစိုးရနှငျ့လညျးကောငျး၊ ဒီမိုကရစေီစနဈ၏ တတိယမဏ်ဍိုငျဖွဈသော လှတျလပျသောတရားရေးမဏ်ဍိုငျနှငျ့လညျးကောငျး မညျသညျ့နညျးနှငျ့မှ အပျစပျခွငျးမရှိသညျမှာ၊ သကျဆိုငျခွငျးမရှိသငျ့တော့သညျမှာ ထငျရှားပါသညျ။ ၃။ ၎င်းငျးအပွငျ နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြအကျဥပဒတှေငျပါရှိသော အဓိပ်ဗါယျဖှငျ့ဆိုခကျြမြားမှာ ကဈြလဈြသိပျသညျးမှုမရှိပဲ ကယျြပွနျ့စှာဖှငျ့ဆိုထားသောကွောငျ့ တရားရေးအာဏာပိုငျမြားအနနှေငျ့ မညျသညျ့အရာသညျ နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြဖွဈသညျ၊ မဖွဈသညျကို လိုအပျသလို အနကျအဓိပ်ဗါယျဖှငျ့ဆိုနိုငျသညျ့အပွငျ တရားပွိုငျသညျ ပွဈမှုမွောကျကွောငျး လကျဆုပျလကျကိုငျမပွနိုငျသျောလညျး တရားရေးအာဏာပိုငျမြားမှ ပွဈမှုမွောကျ၊ မမွောကျ ဆုံးဖွတျနိုငျသော တရားစီရငျရေးအား သငျ့လြျောသညျထကျပို၍ကယျြပွနျ့သော တဦးတညျးဆုံးဖွတျပိုငျခှငျ့အာဏာနှငျ့ လုပျပိုငျခှငျ့ပေးထားသညျ့ ဥပဒလေညျးဖွဈသညျ။ အထကျပါအခကျြမြားကွောငျ့ နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြအကျဥပဒသေညျ ပယျဖကျြသငျ့သောဥပဒေ၊ ပယျဖကျြရနျလိုအပျသညျ့ဥပဒဖွေဈပါသညျ။ ၄။ နိုငျငံတျောလြှို့ ဝှကျခကျြအကျဥပဒေ ပုဒျမ ၃ (၁) (ဂ) အရ မညျသူမဆို နိုငျငံလုံခွုံရေးကိုဖွဈစေ၊ နိုငျငံအကြိုးကိုဖွဈစေ ထိခိုကျစသေော ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ ရနျသူတဦးတယောကျ (သို့) တစုတဖှဲ့ အတှကျ တိုကျရိုကျသျောလညျးကောငျး၊ သှယျဝိုကျ၍သျောလညျးကောငျး အသုံးဝငျစရေနျ တှကျခကျြ၍၊ ရညျရှယျ၍ (သို့) တိုကျရိုကျသျောလညျးကောငျး၊ သှယျဝိုကျ၍သျောလညျးကောငျး အသုံးဝငျကောငျးဝငျနိုငျသော လြှို့ဝှကျရုံးသုံးသင်ျကတေ၊ စကားဝှကျ၊ ရုပျပုံ၊ စနဈပုံ၊ ပုံစံငယျ၊ ပစ်စညျး၊ စာတို (သို့) အခွားစာရှကျစာတမျး၊ သတငျးအခကျြအလကျ မြားကို ရယူ၊ စုဆောငျး၊ ကူးယူ၊ ပုံနှိုပျခွငျး (သို့) အခွား ပုဂ်ဂိုလျတဦးတယောကျသို့ ဆကျသှယျပေးပို့ခွငျး ပွုလုပျပါက ထောငျဒဏျ ၁၄ နှဈအထိ ပွဈဒဏျခမြှတျနိုငျသညျဟု ပါရှိပါသညျ။ ၅။ ရိုကျတာသတငျးအဂေငျြစီမှ သတငျးထောကျမြားဖွဈကွသော ကိုဝလုံးနှငျ့ ကိုကြျောစိုးဦးတို့သညျ ၂၀၁၇ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ ၁၂ ရကျနတှေ့ငျ ၎င်းငျးတို့လကျခံရရှိသော အဆိုပါ စာရှကျစာတမျးမြားကို ဖမျးဆီးခွငျးမခံရမီ ဖတျရှုခြိနျမရရှိခဲ့ကွောငျး တရားခှငျတှငျထှကျဆိုခဲ့ပွီး၊ ၎င်းငျးတို့သညျ ထိုစာရှကျစာတမျးမြားကို နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြအကျဥပဒနှေငျ့ငွိစှနျးသော စာရှကျစာတမျးမြားဖွဈကွောငျး ဖမျးဆီးခွငျးမခံရမီ သိရှိခဲ့သညျဟု ယူဆနိုငျဖှယျရာ အထောကျအထားမခိုငျလုံကွောငျး တှရှေိ့ရပါသညျ။ ၆။ ကိုဝလုံးနှငျ့ ကိုကြျောစိုးဦးတို့သညျ ဖမျးဆီးခွငျးခံရခြိနျတှငျ လကျဝယျတှရှေိ့သော စာရှကျစာတမျးမြားကို သတငျးသမားမြားအနဖွေငျ့ သတငျးထောကျလှမျးရေးသားရနျ ရယူခဲ့ခွငျးဖွဈ၍ ၎င်းငျးတို့သညျ အငျးဒငျရှာတှငျ တပျမတျောသားမြားနှငျ့ ရဲအရာရှိမြားမှ နောငျတှငျကြုးလှနျခဲ့သညျဟု အထောကျအထားသကျသမြေားအရ သိရှိခဲ့ရသော ရှာသား ၁၀ ဦးတို့အား ဥပဒပေ သတျဖွတျမှုဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ သတငျးထောကျလှမျးနစေဉျ ဖမျးဆီးခံခဲ့ရခွငျးဖွဈသညျ။ ၇။ ၎င်းငျးတို့သညျ နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြအကျဥပဒေ ပုဒျမ ၃ (၁) (ဂ) တှငျဖျောပွထားသကဲ့သို့ နိုငျငံလုံခွုံရေးကိုဖွဈစေ၊ နိုငျငံအကြိုးကိုဖွဈစေ ထိခိုကျစသေော ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ ရနျသူတဦးတယောကျ (သို့ ) တစုတဖှဲ့အတှကျအသုံးဝငျသော စာရှကျစာတမျး (သို့) သတငျးအခကျြအလကျ မြားကို ရယူခဲ့ခွငျးမဟုတျပဲ စတုတ်ထမဏ်ဍိုငျ၏ တစိတျတပိုငျးအဖွဈ ဥပဒမေဲ့ပွဈမှုကြူးလှနျသူမြားကို တရားဥပဒအေရစီရငျနိုငျရနျ သတငျးထောကျလှမျးဖျောထုတျသော သတငျးထောကျတာဝနျအရ ၎င်းငျးတို့လကျခံရရှိသော စာရှကျစာတမျးမြားကို လကျခံရယူခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးတို့၏ ကွိုးစားဖျောထုတျမှုကွောငျ့ အငျးဒငျရှာတှငျဖွဈပှားခဲ့သော လူအစုလိုကျအပွုံလိုကျသတျဖွတျမှုကို အမြားပွညျသူသိရှိခှငျ့ရခဲ့သလို ပွဈမှုကြူးလှနျသူမြားကိုလညျး တရားဥပဒအေရ ပွဈဒါဏျမြားခမြှတျခဲ့သညျ။ ၈။ သတငျးမီဒီယာဥပဒေ ပုဒျမ ၇ တှငျ “သတငျးမီဒီယာသမားတဈဦးသညျ စဈမကျဖွဈပှားရာဒသေ၊ အရေးအခငျး၊ အဓိကရုဏျး၊ အမြားပွညျသူဆန်ဒပွရာ နရောဒသေတို့၌ သကျဆိုငျရာ တာဝနျရှိ အဖှဲ့အစညျးက သတျမှတျ ထားသော စညျးကမျးမြားနှငျ့အညီ သတငျးရယူစဉျတှငျ - (က) လုံခွုံရေးဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးတဈရပျရပျ၏ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခှငျ့၊ သတငျးမှတျတမျး စသညျ့သတငျးရယူခှငျ့နှငျ့သကျဆိုငျသောကိရိယာမြားကို သိမျးယူခံရခွငျးနှငျ့ဖကျြဆီး ခံရခွငျးတို့မှ ကငျးလှတျစရေမညျ” ဟုပါရှိပါသညျ။ အထကျပါပုဒျမအရ တရားဥပဒဘေောငျအတှငျးမှ သတငျးရယူလကျြရှိသော သတငျးမီဒီယာသမားမြားဖွဈကွသော ကိုဝလုံးနှငျ့ ကိုကြျောစိုးဦးတို့သညျ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံရခွငျးမှသျောလညျးကောငျး၊ နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြအကျဥပဒအေရ အရေးယူခံရခွငျးမှသျောလညျးကောငျး ကငျးလှတျခှငျ့ရှိသူမြားဖွဈကွသညျ။ ၉။ စာနယျဇငျးလှတျလပျခှငျ့၊ သတငျးမှနျသိရှိခှငျ့ နှငျ့ လှတျလပျစှာထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့ မရှိပါက ဒီမိုကရစေီစနဈတခု လညျပတျရနျမဖွဈနိုငျပါ။ သို့ပါ၍ နိုငျငံရေးဖွဈစဉျတခုသညျ ဒီမိုကရစေီအသှငျကူးပွောငျးနခွေငျးဖွဈသညျ (သို့မဟုတျ) အာဏာရှငျစနဈသို့ နောကျပွနျသှားနခွေငျးဖွဈသညျ ကိုသိရှိသုံးသပျရနျ မီဒီယာလှတျလပျခှငျ့၊ သတငျးမှနျသိရှိခှငျ့ နှငျ့ လှတျလပျစှာထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့ မညျသညျ့အတိုငျးအတာအထိရှိသညျ၊ မရှိသညျကို တိုငျးတာရမညျဖွဈပါသညျ။ ၁၀။ ဒီမိုကရစေီအသှငျကူးပွောငျးရေးနှငျ့သျောလညျးကောငျး ဒီမိုကရစေီအစိုးရနှငျ့သျောလညျးကောငျး မအပျစပျသော ကိုလိုနီခတျေ ဗွိတိသြှအစိုးရမှ ရေးဆှဲထားသောဥပဒအေရ စတုတ်တမဏ်ဍိုငျ၏အစိတျအပိုငျးအဖွဈ မိမိတို့၏တာဝနျအား တရားဥပဒဘေောငျအတှငျးမှကပြှေနျစှာထမျးဆောငျနသေညျသာမက၊ သတငျးမီဒီယာဥပဒေ၏ ပုဒျမ ၇ (က) အရ နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြဥပဒအေရ အရေးယူခံရခွငျးမှ ကငျးလှတျခှငျ့ရှိသူမြားဖွဈကွသညျ့ သတငျးမီဒီယာသမားနှဈဦးအား လုံလောကျသညျ့အထောကျအထားမရှိပဲ ပွဈမှုထငျရှားသညျဟု လှဲမှားစှာခမြှတျခဲ့သော စီရငျခကျြသညျ ဒီမိုကရစေီနှငျ့ဆနျ့ကငျြ၍ခတျေနှငျ့မလြှျောညီသညျသာမက လိုရာဆှဲအဓိပ်ဗါယျဖှငျ့ဆိုနိုငျသညျ့ဥပဒတေခုပျေါတှငျ အခွခေံခမြှတျသော တရားမြှတမှုနှငျ့ဆနျ့ကငျြသညျ့ စီရငျခကျြတခု၏သဘာဝကိုကြျောလှနျကာ စဈအာဏာရှငျစနဈလကျထကျတှငျ ကငျြ့သုံးခဲ့သော ဖိနှိပျမှုမြားနှငျ့ မူအရသျောလညျးကောငျး၊ အကြိုးသကျရောကျမှုအရသျောလညျးကောငျး မခွားနားသညျ့ ဥပဒနှေငျ့ဆနျ့ကငျြသညျ့ အကွှငျးမဲ့အာဏာရှငျဆနျသော စီရငျခကျြဖွဈသညျ။ သို့ဖွဈပါ၍ နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြအကျဥပဒပေုဒျမ ၃ (၁) (ဂ) အရ ကိုဝလုံး နှငျ့ ကိုကြျောစိုးဦး တို့နှဈဦးအပျေါ ခမြှတျခဲ့သောစီရငျခကျြအား ပွနျလညျရုပျသိမျးခွငျးမရှိပဲ စီရငျခကျြအရ ၎င်းငျးတို့နှဈဦးဆကျလကျပွဈဒဏျကခြံနရေလကျြရှိပါက - (က) လှတျလပျရေးရပွီး ဒီမိုကရစေီအသှငျကူးပွောငျးလကျြရှိသျောလညျး ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံသညျ ကိုလိုနီခတျေ ဗွိတိသြှအစိုးရ၏ လောငျးရိပျ နှငျ့ ခယျြလှယျခွငျးခံရသောဘဝမှ မလှတျမွောကျသေးကာ အခြုပျအခွာအာဏာ ထိပါးခွငျးခံနရေလကျြရှိသောသဘောသို့ သကျရောကျစသေညျ။ (ခ) ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံ၏ တရားရေးမဏ်ဍိုငျသညျ လှတျလပျမှုမရှိ၊ တရားရေးမဏ်ဍိုငျအတှငျးတှငျ အကငျြ့ပကျြခစြားမှုရှိနသေညျဟု အသှငျထငျဟပျစမေညျဖွဈသညျ။ (ဂ) ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတှငျ မီဒီယာလှတျလပျခှငျ့၊ သတငျးမှနျသိရှိခှငျ့နှငျ့ လှတျလပျစှာထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့ လုံးဝမရှိကွောငျး ပုံရိပျထငျဟပျစမေညျဖွဈ၍ မွနျမာနိုငျငံ၏ဒီမိုကရစေီအသှငျကူးပွောငျးရေးလမျးစဉျအပျေါတှငျထားရှိသော ပွညျသူမြား နှငျ့ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျး၏ယုံကွညျမှုမှာ မြားစှာကဆြငျးမညျဖွဈသညျ။ (ဃ) ဒီမိုကရစေီအသှငျကူးပွောငျးရေးလမျးစဉျအပျေါတှငျ ထားရှိသောယုံကွညျမှု လုံးဝကငျးမဲ့သှားနိုငျသညျ့နောကျတှငျ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျး၏ ထောကျခံမှုနှငျ့ နိုငျငံတကာရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု ကဆြငျးသထကျ ပိုမိုကဆြငျးမညျဖွဈသညျ။ (င) လကျရှိအာဏာရအစိုးရနှငျ့ ပါတီအပျေါတှငျ ပွညျသူနှငျ့ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျး၏ ထောကျခံမှု သညျလညျး ပိုမိုတိုးလို့ကဆြငျးမညျဖွဈသညျ။ ၁၁။ သို့ဖွဈပါ၍ အမြားပွညျသူအကြိုးစီးပှား၊ နိုငျငံ့အကြိုးစီးပှားကိုလိုလားသောအားဖွငျ့၊ ဒီမိုကရစေီအသှငျကူးပွောငျးရေးကို ထိခိုကျနဈနာစခွေငျးမှလညျးကောငျး ပွညျသူ့အကြိုးစီးပှား၊ အခွခေံရပိုငျခှငျ့အခှငျ့အရေးမြားနှငျ့ အခြုပျအခွာအာဏာကိုလညျးကောငျး ကာကှယျသောအားဖွငျ့ ကိုဝလုံးနှငျ့ ကိုကြျောစိုးဦးတို့အား ၎င်းငျးတို့လကျရှိကခြံနရေလကျြရှိသော ပွဈဒဏျမြားမှ ခြှငျးခကျြမရှိလှတျမွောကျခှငျ့ပေးပါရနျ တောငျးဆိုအပျပါသညျ။ ပွညျသူနှငျ့နိုငျငံ၏အကြိုးစီးပှား၊ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးကိုလိုလား၍ အခြုပျအခွာအာဏာကိုထိပါးခွငျးမှ ကာကှယျလိုသော မွနျမာနိုငျငံသားမြားနှငျ့ ပွညျပရောကျမွနျမာမြားကိုယျစား - မိတ်တူကို -၁။ ပွညျထောငျစု သမ်မတ မွနျမာနိုငျငံတျော နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၂။ ဒုတိယဝနျကွီး၊ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံရုံးဝနျကွီးဋ်ဌာန
Free Wa Lone and Kyaw Soe Oo
Freedom of Prayer for ALL on the Temple Mount in Jerusalem!
The Temple Mount is the holiest site in the world for all people of faith. The God of Israel, through His Prophet Isaiah, said: "For My house will be calledahouse of prayer for all peoples". Today, sadly, only Muslims are allowed to pray on the Temple Mount. Faithful Jews and Christians wishing to worship openly and freely are PROHIBITED, and can even be ARRESTED for praying! THIS IMMORAL AND CRIMINAL INJUSTICE MUST COME TO AN END! PLEASE SIGN THE PETITION, AND HELP BRING CHANGE TODAY! Thank you, and God bless!
Petition to Adriel Lopez
Let my mom let me dye my hair
I wanna dye my hair light brown, my hair is currently brown right now. My mom won’t let me dye my hair so helpahomie out and sign this petition so she can let me dye my wack hair before school stars �� LETS GET THIS BREAD
Petition to Νίκος Αναστασιάδης, Βουλή των Αντιπροσώπων Κύπρου, ΕΔΕΚ , Συμμαχία Πολιτών, ΑΚΕΛ , ΔΗΚΟ , Averoff Neophytou, European Ombudsman
Υποστήριξη στον Σενέρ Λεβέντ - Support Sener Levent (Σενερ Λεβεντ)
Η ελευθερία του λόγου δέν γίνεται ανεκτή από τους ισλαμοφασίστες στην κατεχόμενη βόρειαν Κύπρον. Από το 1974, το βόρειον τμήμα της Κύπρου κατέχεται στρατιωτικά από την Τουρκίαν, η οποία ελέγχει τα πάντα. Ο Σενέρ Λεβέντ είναι ένας Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος που δέν μασά τα λόγια του. Για αυτόν, η τουρκική κατοχή είναι άγρια κατοχή και όχι σωτηρία ή ειρήνευση. Οι φασίστες, όπως οι Γκρίζοι Λύκοι, και το ισλαμοφασιστικό καθεστώς του Ερτογάν τον βλέπουν ως ο ταύρος το κόκκινον πανί. Θέλουν να τον σιγήσουν και οι απειλές τους πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν. Τέτοιοι νταήδες τύποι είναι επικίνδυνοι και οι δολοφονίες δέν αποκλείονται από τις τακτικές τους. Η συμπαράστασή μας στον Λεβέντ είναι απαραίτητη! ******** Konusma ozgurlugu isgal altindaki Kuzey Kibris ta fasist islamalar tarafindan kabul edilmiyor. Kibris in Kuzey kesmi1974 ten beri Turkiye tarafindan hem askerihem baska acidan isgal altinda.Sener Levent kelimelerini cignemeyen bir Turk Kibrisli gazetecidir Onun icin Turk isgali vahsi bir isgaldir Kurtulus ve barisal degildir. Fasist Erdogan rejimi ile bozkurt denilen fasist islamcilar onu boganin hedefinde olan kirmizi bez olarak goruyorlar. Onu ortadan kakdirmak istiyorlar ve ona karsi edilen tehditlerin ciddiye alinmasi gerekiyor. Boyle tip dayilar tehlikeli ve suikastlerin cinayetlerin taktiklerinde eksik olmayan kisilerdir. Leventedesteginiz onemli!************* Speaking up your mind is not tolerated by the islamofascists in occupied Northern Cyprus. The Northern part of Cyprus is occupied militarily and in every other aspect by Turkey since 1974. Sener Levent isaTurkish Cypriot journalist who does not mince his words. For him Turkish occupation is brutal occupation and not benevolence or peace making. For fascists, like the Grey Wolves, and Erdogan's islamofascist establishment he is like the red cape toabull. They want to silence him and their intimidation should be taken seriously; these guys are bullies and even killing is not excluded from their tactics. Our support to Levent is absolutely necessary!
Petition to Donald J. Trump, Donald J. Trump, Donald Trump, Reince Priebus, Mitch McConnell, Mike Pence, Jeff Sessions, Sean Hannity
End Big Tech Internet Censorship -- NOW!
Big Tech social media companies like Facebook, Twitter, YouTube, Apple/iTunes, Microsoft, Disqus, and many others have taken to banning anyone that doesn't align 100% with their narrative going into the 2018 elections. They are silencing the voices of Conservative Republicans and now, as of this past week, even those of moderate Democrats that are beginning to question the direction of the DNC, who seem to blindly back actions of known DHS terrorist group AntiFa and the lies of the MSM's "Fake News" narratives, while clearly and openly supporting an anti-American Communist agenda. The US Government must step in to ensure that our Constitutional rights are protected leading into the 2018 elections, and all companies utilizing the $1.4 Trillion US taxpayer (bought and paid for) internet infrastructure is protected and that US Rule of Law is present and applied equally to preserve our right as free US citizens to communicate thoughts and ideas leading into the election season and time indefinite going forward.